နူးညံ့သောအသားအရေအတွက်နနွင်းကို သုံး၍ အိမ်သုံးကုထုံးများ - PAMPEREDPEOPLENY.COM - အလှတရား
မော်တော်ကားများ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် Kabira Mobilityes Hermes ၏ ၇၅ မြန်နှုန်းမြင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးစကူတာကိုစတင်ခဲ့သည်
ရုပ်ရှင်များ Ugadi 2021: Mahesh Babu၊ Ram Charan, Jr NTR, Darshan နှင့်အခြားကြယ်တောင်ကြယ်များသည်သူတို့၏ပရိသတ်များအားအလိုဆန္ဒများကိုပို့ပေးသည်။
အားကစား IPL 2021 - ဟာရှယ်လ်ပါတယ်လ်က ၂၀၁၈ လေလံပွဲကိုသတိမထားမိဘဲရိုက်လိုက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့တယ်
နေအိမ် အလှအပ အရေပြားထိန်းသိမ်းမှု အရေပြားထိန်းသိမ်းမှု oi-Monika Khajuria By Monika Khajuria မေလ 30, 2019 ရက်တွင်
နနွင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိခင်များနှင့်အဖွားများခံစားခဲ့ရသောရှေးဟောင်းဆေးတစ်လက်ဖြစ်သည်။ နနွင်းသည်အရေပြားဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ပြီးကျန်းမာပြီးကြည်လင်သောအသားအရေကိုပေးနိုင်သည်။ နနွင်းသည်သင်၏အသားအရေကိုသဘာဝအလင်းရောင်ပေးနိုင်သည်ကိုသင်သိပါသလား။
ကောင်းပြီ၊ ဒါကများစွာသောသူအတွက်အံ့အားသင့်စရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သတို့သမီးကိုမင်္ဂလာဆောင်သွန်းလောင်းမည်ဟုထင်သောမင်္ဂလာဆောင်ပွဲများတွင် 'ဟယ်ဒီ' အခမ်းအနားကိုသတိရပါ။ နာမတော်၏အဆိုအရနနွင်းသည်အလင်းကိုပေးရာတွင်သူရဲကောင်းဖြစ်သည်။ 
နနွင်းသည်အရေပြားကျန်းမာရေးကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ဓါတ်တိုးခြင်းနှင့်ရောဂါပိုးမွှားတိုက်ဖျက်ခြင်းဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ဝက်ခြံကိုကုသရန်နှင့်အရေပြားအပေါ်သို့ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၏ဆိုးကျိုးများကိုတိုက်ဖျက်ရန်ကူညီသည်။ [နှစ်ခု] နနွင်းသည်အရေပြားကိုကျန်းမာစေပြီးကူးစက်ရောဂါများမှကာကွယ်ပေးသည်။ 
အရေးအကြီးဆုံးကတော့နနွင်းမှာ curcumin လို့ခေါ်တဲ့ခြယ်ပစ္စည်းတစ်ခုပါဝင်ပြီးအရေပြားအတွက်အလွန်အကျိုးရှိသည်။ ၎င်းသည်အသားအရေကိုသက်သာစေရုံသာမကမျက်နှာအသားအရေကိုချောမွေ့စေရန်အတွက်အလွန်ထိရောက်သောကြောင့်အသားအရေကိုတောက်ပစေပါသည်။ 
သငျသညျလညျးထိုသဘာဝအလင်းရောင်ချင်လျှင်ဒီတော့နနွင်းသည်သင်တို့အဘို့ဖြစ်၏။ ဤအချက်ကိုစိတ်စွဲမှတ်ထားပါ၊ ယနေ့ဤဆောင်းပါး၌နင့်နနွင်းကိုအသုံးပြုရန်သင်နှစ်သက်သောအသားအရေကိုရရှိစေရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများကိုသင့်အတွက်ပြင်ဆင်ပေးထားသည်။ ကြည့်ပါ ဦး!
နနွင်းနှင့်ပျားရည်တို့သည်စွမ်းအင်ပြည့်ဝစွာပေါင်းစပ်ထားသည်။ နနွင်းသည်အသားအရေအားနူးညံ့ချောမွေ့စေပြီးနူးညံ့ချောမွေ့။ အသားအရေကိုနူးညံ့ချောမွေ့စေသည်။ 
• 1 tbsp ပျားရည်
• ၁၀-၁၅ မိနစ်ခန့်ထားပါ။
Egg white သည်ပရိုတင်းများနှင့်အမိုင်နိုအက်ဆစ်များပါ ၀ င်ပြီးအရေပြားကိုစိုပြည်စေပြီးနုပျိုသောအသားအရေကိုပေးစွမ်းနိုင်သောအရေပြား elasticity ကိုတိုးတက်စေသည်။ 
•၎င်းကိုမိနစ် ၂၀ ထားပါ။
ဒိန်ချဉ်တွင်ပါဝင်သော Lactic acid သည်အရေပြားဆဲလ်များနှင့်အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်အရေပြားကို exfoliates ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အရေးအကြောင်းများနှင့်ကောင်းမွန်သောလိုင်းများကိုလျှော့ချပေးသည်။  အုန်းရေနံသည်အသားအရေအားအခမဲ့အစွန်းရောက်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ပေးသောဓါတ်တိုးပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။
•3Tsp နနွင်းမှုန့်
• 1 tbsp ဒိန်ချဉ်
•ပျားရည် ၁ မျိုး
• 1 Tsp အုန်းဆီ
•ခြောက်သွေ့စေရန် ၁၀-၁၅ မိနစ်ခန့်ထားပါ။
Aloe vera သည်ဗီတာမင်နှင့်ဓာတ်သတ္တုအမျိုးမျိုးရှိပြီးအသားအရေကိုစိုပြေစေပြီးအသားအရေကိုကျန်းမာစေသည့်အပြင်အသားအရေကိုတောက်ပစေသည့်သဘာ ၀ အရောင်ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော့ဖျော်ရည်အဖြစ်အာလူးပြုသည်။ 
• 1 ပြီးလျှင်အာလူး
•2Tsp လတ်ဆတ်သောရှားစောင်းလက်ပတ်
•အရောအနှောကိုသင်၏မျက်နှာပေါ်တွင်တင်ပါ။ သင်၏မျက်နှာကို ၅-၁၀ မိနစ်ကြာညင်သာစွာပွတ်ပေးပါ။
•မိနစ် ၃၀ ခန့်ထားပါ။
•ရေအေးကို အသုံးပြု၍ ဆေးပါ။
• 1 Tsp ဗာဒံသီး
•ပါ ၀ င်သည့်ပစ္စည်းများကိုပန်းကန်လုံးထဲအတူတကွရောထွေးပါ။
• ၁၀ မိနစ်လောက်ထားပါ။
၆။ နနွင်း၊ ရှားစောင်းလက်ပတ်နှင့်သံပုရာ
သံပုရာသည်အသားအရေကိုကြည်လင်စေသောဂုဏ်သတ္တိများကြောင့်လူသိများသည်။ ထို့အပြင်၎င်းသည် antioxidant နှင့် antiaging ဂုဏ်သတ္တိများရှိပြီးအရေပြား elasticity ကိုတိုးတက်စေပြီးအရေးအကြောင်းများနှင့်လိုင်းကောင်းများကိုလျှော့ချပေးသည်။ 
• 1 tbsp ရှားစောင်းလက်ပတ်
• 1 Tsp လောလောလတ်လတ်ညှစ်ထားသောသံပုရာဖျော်ရည်
• aloe vera gel ကိုပန်းကန်လုံးထဲယူပါ။
7. နနွင်း၊ ဂရမ်ပန်းနှင့်နှင်းဆီရေ
ဂရမ်ဂျုံမှုန့်သည်အရေပြားဆဲလ်သေများနှင့်အညစ်အကြေးများကိုဖယ်ရှားပေးပြီးအရေပြားအတွင်းရှိအဆီထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်နှင့်အရေပြား၏ pH ဟန်ချက်ကိုထိန်းသိမ်းရန်အတွက်နှင်းဆီရေမှဆွဲငင်နိုင်သောဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။
• & frac12 Tsp ဂရမ်ဂျုံမှုန့်
• 1 tbsp ရေထ
• ၁၅ မိနစ်လောက်ထားပါ။
၈။ နနွင်း၊ စန္ဒကူး၊ သံလွင်ဆီ
Sandalwood သည်အရေပြားကိုကျန်းမာစေပြီးသက်သာစေသည့် antiseptic, inflammatory and analgesic ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။  သံလွင်ဆီတွင်ပါ ၀ င်သည့် antioxidants နှင့် Vitamin E သည်အရေပြားကိုပျက်စီးခြင်းမှကာကွယ်ပေးပြီးအသားအရေကိုအချိန်မတန်မီအိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးသည်။
• & frac12 Tsp စန္ဒကူးအမှုန့်
• 1 tbsp သံလွင်ဆီ
•2Tsp နို့
• ၁၅-၂၀ မိနစ်ခန့်ထားပါ။
•အချို့သော moisturizer ကိုသုံးပြီးပြီးအောင်လုပ်ပါ။
10. နနွင်း၊ ဒိန်ချဉ်နှင့် Lavender မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံ
ဒိန်ချဉ်သည်အသားအရေ၏အသွင်အပြင်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပြီး lavder မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီသည်အသားအရေကိုသက်သာစေပြီးကာကွယ်ပေးသော anti-inflammatory နှင့် antioxidant ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။ [ဆယ့်တစ်]
•2Tsp ဒိန်ချဉ်
•လာဗင်ဒါမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောဆီ၏ ၂-၃ ကျင်း
Prasad S, Aggarwal BB ။ နနွင်း၊ ရွှေနံ့သာ: ရိုးရာဆေးမှသည်ခေတ်သစ်ဆေးပညာအထိ။ ခုနှစ်တွင်: Benzie IFF, Wachtel-Galor S, အယ်ဒီတာများ။ ဆေးဖက်ဝင်အပင်များဆေးပညာ: Biomolecular နှင့်လက်တွေ့ရှုထောင့်။ 2nd ထုတ်ဝေ။ Boca Raton (FL): CRC Press / Taylor & Francis 2011. အခန်း ၁၃ ။
[နှစ်ခု]Vaughn, အေ R. , Branum, အေ, & Sivamani, R. K. (2016) ။ အရေပြားကျန်းမာရေးအပေါ်နန (Curcuma longa) ၏ဆိုးကျိုးများ: လက်တွေ့သက်သေအထောက်အထားများ။ Phytotherapy သုတေသန, 30 (8), 1243-1264 ကိုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်သည်။
Hollinger, ဂျေစီ, Angra, K. , & Halder, R. အမ် (2018) ။ သဘာဝပါဝင်ပစ္စည်းများ Hyppigmentation ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ထိရောက်သောရှိပါသလား လက်တွေ့နှင့်ဗေဒအရေပြားရောဂါဗေဒ၏တစ် ဦး ကစနစ်တကျ Review.The ဂျာနယ်, 11 (2), 28-37 ။
McLoone, P. , Oluwadun, အေ, Warnock, အမ်, & Fyfe, အယ်လ် (2016) ။ ပျားရည် - Skin.Central အာရှ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဂျာနယ်၏ရောဂါများအတွက်ကုထုံးဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တစ် ဦး၊ ၅ (၁)၊ ၂၄၁ ။ Doi: 10.5195 / cajgh.2016.241
Murakami, အိပ်ချ်, Shimbo, K. , Inoue, Y. , Takino, Y. , & Kobayashi, H. (2012) ။ UV-irradiated mice.Amino အက်ဆစ်, 42 (6), 2481-2244 အတွက်အရေပြားကော်လာဂျင်ပရိုတိန်းပေါင်းစပ်နှုန်းထားများတိုးတက်စေရန်အမိုင်နိုအက်ဆစ်ဖွဲ့စည်းမှု၏အရေးပါမှု။ Doi: 10,1007 / s00726-011-1059-z
Smith ကဒဗလျူပီ (1996) ။ အရေပြားနှင့်သက်ဆိုင်သည့် Lactic acid.Journal ၏အရေပြားဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ၊ အရေပြားရောဂါဗေဒ၏အမေရိကန်အကယ်ဒမီ၊ ၃၅ (၃)၊ ၃၈၈-၃၉၁ ။
Surjushe, အေ, Vasani, R. , & Saple, G. G. အ (2008) ။ ရှားစောင်းလက်ပတ် - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း။ အိန္ဒိယအရေပြားရောဂါဗေဒဂျာနယ်၊ ၅၃ (၄)၊ ၁၆၃ ။
အာမက်, Z. (2010) ။ လက်တွေ့အလေ့အကျင့်အတွက်ဗာဒံဆီ.Complementaryကုထုံး, 16 (1), 10-12 ၏အသုံးပြုမှုနှင့်ဂုဏ်သတ္တိများ။
ကင်မ်, D. ခ, Shin, G. အအိပ်ချ်, ကင်မ်, ဂျေအမ်, ကင်မ်, Y. အိပ်ချ်, Lee က, ဂျေအိပ်ချ်, Lee က, ဂျေအက်စ်, ... & Lee က, O. အိပ်ချ် (2016) ။ anti-oxidant နှင့် citrus-based ဖျော်ရည်ရောစပ်မှု၏အိုမင်းခြင်းကိုတိုက်ဖျက်သည့်လုပ်ဆောင်မှုများ။ အစားအစာဓာတုဗေဒ၊ ၁၉၄၊ ၉၂၀-၉၂၇ ။
Kumar က ((2011) ။ ဆေးဝါးဗေဒ & pharmacotherapeutics ၏ Pterocarpus santalinus L.Journal ၏ methanolic သစ်သားထုတ်ယူ၏ရောင်ရမ်း, analgesic နှင့် antioxidant လှုပ်ရှားမှုများ,2(3), 200-202 ။ Doi: 10.4103 / 0976-500X.83293
[ဆယ့်တစ်]Cardia, G. အ, Silva-Filho, အက်စ်အီး, ဆေးလ်ဗား, အီးအယ်လ်, Uchida, N. အက်စ်, Cavalcante, အိပ်ချ်, Cassarotti, အယ်လ်အယ်လ်, ... Cuman, R. (2018) ။ Acute ရောင်ရမ်းတုံ့ပြန်မှုအပေါ် Lavender (Lavandula angustifolia) မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောရေနံအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ biryani အမျိုးအစားမည်မျှရှိသနည်း
ပန်းသီး cider ရှလကာရည်ဂျင်းသံပုရာနှင့်ပျားရည်ကို
အရေပြားအတွက် anulom vilom pranayama ၏အကျိုးကျေးဇူးများ